Izindawo ezibandayo kangangokuba kubonakala kungenakwenzeka ukuthi abantu bahlale kuzo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
UDavid melguizo | | Isimo sezulu, Amagagasi abandayo
I-Oymyakon ebusika, eSiberia, eRussia
Ukubanda kubuya ukusivakashela futhi kulula ukukhumbula ukuthi ezikhathini eziningi sikhononda ngobubi. Ngalokhu, sizobheka izindawo ezibandayo kakhulu emhlabeni lapho, yize kungabonakala kungakholeki, abantu bahlala unyaka wonke.
Izakhamizi zezindawo ezinjengeVerkhoyansk, Yakutsk o I-Oymyakon (yomibili eRussia) iphila izimpilo ezihluke kakhulu kunezethu, okungenani ebusika. Isibonelo, abashayeli kula madolobha bashiya izimoto zabo zidatshuliwe ezindaweni zokupaka amahora amaningi ngenkathi bethenga noma benza okuthile, imvamisa kudingeka bashise uwoyela othambisa ezimotweni zabo nge-blowtorch ukuze bawuqede.
La izinga lokushisa eliphansi kunazo zonke ezake zarekhodwa ebusweni bomhlaba, njengoba besikhulume ngakho endabeni ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, yenzeke endaweni eseduze nentaba yase-Antarctic, yafinyelela amanani angaphansi kuka-92ºC ngobusuku obucwathile basebusika. Yize engekho emadolobheni esizowahlunga afinyelela kula mazinga okushisa, amanye awo asondele ngendlela eyingozi kulezi zimiso. Lezi yizindawo ezimbili ezibandayo kakhulu emhlabeni.
Ngokwabantu ababalwa ngo-2002, iVerkhoyansk (iRussia) yayinabantu abangu-1434 1638; abantu abakwazi ukuqhubeka nezimpilo zabo ehlane elijulile laseSiberia. Leli dolobha lasungulwa njengenqaba ngo-650 futhi lisebenza njengesikhungo sesifunda sokufuya izinkomo kanye nokumbiwa kwegolide nethini. Itholakala ku-2400 km ukusuka eYakutsh kanye ne-1860 km ukusuka esigxotsheni esisenyakatho. IVerkhoyansk yasetshenziselwa ukufaka abathunjwa bezepolitiki phakathi kuka-XNUMX nasekuqaleni kwekhulu leminyaka elidlule.
Akumangalisi ukuthi abathunjwa bakhethwa ukuba bathunyelwe eVerkhoyansk. NgoJanuwari izinga lokushisa elimaphakathi cishe lingu-45ºC ngaphansi kuka-zero, futhi phakathi kwezinyanga zika-Okthoba no-Ephreli lesi silinganiso sihlala singaphansi kwamazinga okubanda. Ngo-1982, izakhamuzi zakhona zabhalisa amazinga okushisa acishe abe ngu-68ºC ngaphansi kuka-zero, izinga lokushisa elisesezingeni eliphansi kunawo wonke ake afinyelelwa kule ndawo. La mazinga okushisa asho ukuthi ngezikhathi ezibandayo abantu abaphumi ngaphandle izinsuku eziningi.
Izakhamizi zase-Oymyakon zisikhumbuza, lapho iVerkhoyansk ithi iyindawo ebanda kunazo zonke enyakatho ye-hemisphere, ukuthi idolobha labo liphinde labhalisa izinga lokushisa lika-68 zeroC ngaphansi kuka-zero ngoFebhuwari 6, 1933. Kuya ngokuthi ubuza kubani, phakathi kuka-500 no-800 abantu babiza i-Oymyakon ekhaya. I-Oymyakon itholakala ngemoto yezinsuku ezintathu ukusuka eYakutsk, inhlokodolobha yeRiphabhulikhi yaseSaja empumalanga yeSiberia. Kule ndawo izikole zihlala zivulekile ngamazinga okushisa angaphansi kuka-46ºC ngaphansi kuka-zero.
Leli dolobha lithatha igama lalo emthonjeni wamanzi ashisayo, ezinye izakhamuzi zalo ezilisebenzisa njengompompi wamanzi ashisayo, liphula ungqimba olujiyile lweqhwa olumboza ubusika. Ibhodi Yezokuvakasha lase-Oymyakon iveza leli dolobha njengendawo okuyiyona efanelekile yabahambi abalambele ukuzijabulisa nabathanda okwenzeka kakhulu.
Lezi yizimo ezimbili ezeqisa kakhulu, kepha kunezinye izindawo emhlabeni lapho amakhaza enza impilo namasiko abantu bayo, okungenani, akhetheke.
Imininingwane engaphezulu: Izinga lokushisa eliphakeme ngokungajwayelekile endaweni ebanda kakhulu, Izinga lokushisa eliphansi kunawo wonke ake abhalwa emhlabeni
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Amagagasi abandayo » Izindawo ezibandayo kangangokuba kubonakala kungenakwenzeka ukuthi abantu bahlale kuzo